Pirezidaantiin Turkii Erdoogaan: Jamaal Kaashoojii ajjeesuuf qondaalotni mootummaa Sawudii dursuun Istaanbul galan jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidaantiin Turkii Erdoogaan: Jamaal Kaashoojii ajjeesuuf qondaalotni mootummaa Sawudii dursuun Istaanbul galan jedhan
23 Onkololeessa 2018
Image copyright AFP/EPA
Goodayyaa suuraa Suura Jamaal Kaashoggiifi Xayiib Erdoogaan addaa addatti
Pirezedaantiin Turkii gaazexeessaan Sa'uudii qeequun beekamu Jamaal Kaashoojii kan ajjeefame dursamee itti yaaduun karoorfamee ta'uu ragaan agarsiisu akka jiru bakka bu'oota uummataaf ifa godhan.
Gaazexeessaan Sa'uudii qeequun beekamu kun shira duraan qophaa'eefi "gara jabina hamaan" akka ajjeefame ragaa jajjaba biyyi isaanii Turkiin walitti qabatteetti jedhan Pirezedaant Xayiib Erdogaan.
Pirezedaantiin Turkii Erdoohan ajjeechaa Jamaal Kaashoojii irratti maal jedhan?
Sawud Arabiyaan amma reeffi gaazexessaa kanaa eessa akka jiruu fi ajjeechaa kana eenyu akka qindeesse irratti odeeffannoo kennuu qabdi jedhan pirezedaantiin Turkii Erdoohaan..
Erdohaan ergaa kana kan dabarsan wayita konfiransiin invastimantii Sawudiitti gaggeefamu jalqabuuf jedhutti yoo tahu, mootummootnii fi abbootiin qabeenyaa konfiransicha hirmaachuuf jedhanis keessaa bahaa jiru.
Pirezedaantiin Turkii akka jedhanitti lammiileen Sawudii 15 tahan garee sadiitti qoodamuun balalii garaagaraa sadiin guyyaa wal fakkaataa fi sa'aatii wal fakkataan Istaanbul galan jedhan.
Guyyaa ajjeechaa rawwatame dursuun miseensonni gariin gara bosona Beelgraad naannoo Qonsila Sawudiitti argamu deemuu himan.
Bosonni kun bakka torbanoota darban poolisiin reeffa Jamaal Kaashoojii barbaadaa turedha.
Goodayyaa suuraa Bosona Belgraadii fi Qonsila Sawudii Istaanbul jiru
Dabalataan osoo Jamaal Kaashoojii achi hin gahiin dura haala jarreen kunneen Qonsilicha keessaa qaama waraabbii kaameeraa nageenyaa CCTV balleessan himan.
Namni Kaashoojii fakkaatu uffata, Fuullee ijaa, fi areeda isaa fakkeessuun gaafa inni ajjeefamu Kaashoojii fakkaatee Qonsilicha keessaa bahuus himan.
Namtichi kun fakkeessee haala kanaan kan qophaa'ee fi garee namoota ajjeechaaa sana raawwatan keessas tokko tahuu himan.
Viidiyoo kana CNN waraabbii kaameeraa nageenyaa CCTV waliin xiinxaluun ifa taasiseera.
Xalayaan Maayik Koofmaan waa'ee Geetaachoo Asaffaa barreessan maal akeeka?
Addi Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeen (ONLF) attamiin as gahee?
Abbaa 'baandii nama tokkoo' Laggasaa Abdii yoo yaadatamu
Pirezedaanti Erdoohaan namootni 18 dhimma kanaan walitti dhufeenya qabu jedhaman Sawud Arabiyaa keessatti hidhamuu himaniiru.
Akkasumas sagalees tahe viidiyoo akka ragaatti walitti qabamee fi miidiyaalee Turkiin gabaafamanis ifa hin taasifne.
Akka yaadakootti namootni 18 kunnen osoo Istaanbul keessatti to'atamaniiru tahee fi adabamani tahee natti tola ture jedhan Erdoohaan.
Dabalataan shakkamtootni kunneen aanga'oota Sawudii 15 guyyaa ajjeechaa sana dursuun gara Istaanbul deeman dabalata jedhan.
Qonsila Sawudii Istaanbul keessa kan hojjetan qondaalotni sadiis akka jiran himan.
Erdoohaan waa'ee Sawudii maal jedhan?
Erdoohaan komishiniin tokko of danda'ee dhaabbachuun dhimma ajjeechaa kana qorachuu qaba jedha.
Mootii Sawudii namootni baay'een ajjeechaa kana isatu ajaje jedhu ilaalchisee ani itti hin amanu kun hariiroo dippilomaasii keenya booressuu waan yaalamedha jedhan.
Qorannoo isaa ilaalchisee garuu deeggarsa guutuu taasisa jennee amanna jedhan.
Pirezedaantichi dhugaa qulqulluu waa'ee ajjechaa Kaashoojii ibsu ni ibsanias jedhaniiru.
Sawudiin maal jette?
Duraan Sawudiin akka lubbuun achii bahe ibsaa turtus booda garuu ministeerri dhimma alaa Sawudii beekamtii fi ajaja keenyaan ala wal dhabdee Qonsilaa keessatti uumameen ajjefameera jechuun ibsa kenne.
Ministirri Abdel al-Juuber reeffi isaa garuu eessa akka jiru hin beeknu jedhan.
Roowutersi Maddeelee odeeffannoo nageenyaa Turkii fi Arabaa wabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti mootiin Sawudii qondaalota olaanoo lama hojiirraa ari'eera.
Isaan keessaa tokko Sawu al- Qaatiinii yeroo dhimmi Kaashoojii gaafatamaa ture karaa skype ''mataa saree sanaa naaf fidaa,'' jechuusaa Turkin waraabbattee akka qabdu himte.
Garuu Ameerikaaf kennuuf eeyyamamoo miti.
Erga gaafa achi buuteen gaazexeessaan beekamaa kun dhibamee booda, Sa'uudi Arabiyaan guyyoota muraasa dura amantee, 'dogoggora cimaa' akka ta'es ifa gooteetti.
Biyyooni Awurooppaa, Kanaadaafi Ameerikaanis yakka raawwatame kana qeequurra darbanii warri akka Jarman waliigaltee bittaafi gurgurtaa meeshaa waraanaa dolaara biliyoona hedduu haquuf akka jiran dubbachaa jiru.
Suuraawwaniifi viidiyoowwan kaameraawwan 'CCTV' irraa argaman kun akka agarsiisanitti, Jamaal Kaashoojiin kan geengoo diimaa sana keessa jirudha.
Kun yeroo inni Qoontsilaa Sa'uudi Arabiyaa Turki keessatti argamu yeroo seenutti ture.
Qoontsilaa sana seenee kan achi buuteen isaa dhabames gaafa Onkoloolessa 02, 2018 irraa kaasee ture.
Achi buutee tasaa: Namootni Sa'uudii qeeqan akkamiin dhabamu
Sawud Arabiyaan biyyoota Lixaa irraa dhiibbaa cimaaf saaxilamaa jirti. Haa tahu malee Sawudiin deegarsa biyyoota ollaa akka Kuweetii fi Gibtsi irraa ammayyuu akka qabdus himteetti.
Viidiyoo Achi buutee tasaa: Namootni Sa'uudii qeeqan akkamiin dhabamu
Mootiin Sa'uudii qondaala waraana biraa muudan
27 Guraandhala 2018